के तपाईंलाई थाहा छ संसारको सबैभन्दा ठुलो जनावर कुन हो ? - Mero LifeStyle Mero LifeStyle
के तपाईंलाई थाहा छ संसारको सबैभन्दा ठुलो जनावर कुन हो ?
संसारका धेरै अनौठा जनावरहरूको बारेमा थाहा होला तर के तपाईलाई थाहा छ ? संसारको सबैभन्दा ठुलो जनावर कुन हो ? तपाईले सोचिरहनुभएको होला कि हात्ती संसारको सबैभन्दा ठुलो जनावर हो । तर संसारको सबैभन्दा ठुलो जनावर ब्लु ह्वेल हो । आज हामी यसको बारेमा केही रोचक तथ्यहरू बताउनेछौँ ।
३६०० माछा खपत
यो थाहा पाउँदा तपाईं छक्क पर्नुहुनेछ कि नीलो ह्वेलले खाना खुवाउने मौसममा हरेक दिन ३६०० माछा खान्छ । निलो ह्वेलको जिब्रोको तौल लगभग अफ्रिकी हात्तीको तौल जत्तिकै हुन्छ ।
निलो ह्वेल एक स्तनधारी जनावर हो । यो यति ठुलो हुन्छ कि यसको अगाडि हात्ती पनि सानो देखिन्छ । एउटा निलो ह्वेलको तौल ४ लाख पाउन्ड हुन्छ । यसको मतलब यसको वजन ३३ हात्ती बराबर हुन्छ । यसको लम्बाइ ब्राजिलको रियो दि जेनेरियोमा रहेको क्राइस्ट स्ट्याचु जस्तै छ । यसको मुटु एउटा कार जत्तिकै हुन्छ ।
ब्लु ह्वेलको आवाज धेरै ठुलो हुन्छ । यसको आवाज संसारकै सबैभन्दा ठुलो आवाज मानिन्छ । यसको आवाज जेट इन्जिन भन्दा पनि ठुलो हुन्छ । जहाँ जेट इन्जिनले १४० डेसिबल ध्वनि उत्पादन गर्न सक्छ । अर्कोतर्फ, नीलो ह्वेलले एक पटकमा १८८ डेसिबलसम्मको आवाज निकाल्न सक्छ । कम स्वरमा बोल्दा पनि सयौँ माइल टाढा सुन्न सकिन्छ ।